ပြင်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် UMFCCI မှတာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ် / မျိုးပပစန်း / ဧရာဝတီ
By မျိုးပပစန်း4February 2020
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ အကျိုးတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ပြင်သစ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ၁၇ ဦးခန့် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု၊ လက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်က လာရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို ပြင်သစ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် French –Myanmar Business Council နှင့် ASEAN Committee of MEDEF International ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Francois CORBIN နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy တို့ ဦးဆောင်မှုဖြင့် နှစ်ဖက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံကြခြင်း ဖြစ်သည်။
UMFCCI ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေးက “လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက်က အခုလို ပြင်သစ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တွေ အုပ်စုလိုက် လာသေးတယ်။ အခုက ဒုတိယအကြိမ် လာတာ။ ပြင်သစ်ရဲ့ ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီတွေ ပါတယ်။ မြန်မာရဲ့ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍတွေမှာ လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေလည်း ပါတယ်။ သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံကို ယုံကြည်မှု ရှိလို့ အလားအလာကောင်း ရှိတာ သိတဲ့အတွက် လာတာလို့ ပြောတယ်” ဟု ပြောသည်။
ပြင်သစ် စီးပွားရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင် စွမ်းအင်လုပ်ငန်း၊ ရေနှင့် အမှိုက်သန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရထားလမ်း ပို့ဆောင် ရေး လုပ်ငန်း၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ လုပ်ငန်း၊ ဘဏ်နှင့် ချေးငွေ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ စားသောက် ကုန်လုပ်ငန်း၊ ရေကြောင်းနှင့် ကုန်တွင်း ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများမှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ပါ ဝင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေးက ဆက်လက်၍ “သူတို့ ထပ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်မယ်။ စွမ်းအင်တို့ မီးရထား လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွေ ဆိပ်ကမ်းကိစ္စတွေ ပါပါတယ်။ ကဏ္ဍတော့ စုံတယ်။ ဒါကို သူတို့ တိုးချဲ့ပြီး လုပ်မယ်။ အသစ်လုပ်မယ့် ကုမ္ပဏီတွေလည်း ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဘယ်လောက် တိုးချဲ့မယ်တော့ မပြောသေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် စက်မှုကဏ္ဍ၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာကဏ္ဍနှင့် စီးပွားရေး ကဏ္ဍတို့တွင် အလွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လျက်ရှိ သဖြင့် ပြင်သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ပိုမိုကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍမှပါ ဝင်၍ နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန် အကျိုးခံစားခွင့်များဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း UMFCCI ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်း ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၈ နှစ်ခန့်က ပြင်သစ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် UMFCCI တို့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။
ပြင်သစ် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy က အနာဂတ်တွင် နှစ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရန် အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ စီးပွားရေး မိတ်ဖက်များကို ရှာဖွေရန် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီးပွားရေး အခွင့် အလမ်းသစ်များနှင့် စိန်ခေါ်မှု အသစ်များအတွက် ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခု မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သော ပြင်သစ် လုပ်ငန်းရှင်များသည် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်သို့လည်း ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုများအတွက် သွားရောက် လေ့လာရန် ရှိနေကြောင်းလည်း သိရသည်။
Topics: UMFCCI, ပြင်သစ်လုပ်ငန်းရှင်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု